မြောက်ကိုရီးယားနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် မွန်ဂျေအင်း ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်းတို့သည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းစင်ရေးအတွက် ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မွန်သည် ဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်တွင် အိမ်ဖြူတော်သို့ တရားဝင်အလုပ်သဘောခရီးစဉ်အဖြစ် ဧပြီလ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီဒဲ ဆူဂါ လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် လာရောက်သည့် ပြည်ပခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက် အိမ်ဖြူတော်တွင် ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဘိုင်ဒန်က ၎င်းနှင့် မွန်တို့သည် မြောက်ကိုရီးယားအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဘိုင်ဒန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ သံတမန်နည်းလမ်းကျကျ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းစင်ရေး နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဆီကို သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တင်းမာမှုတွေကို လျှော့ချသွားမယ့် လက်တွေ့ခြေလှမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဒါက ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမှားတွေအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မရှိနေပါဘူး။ လုံးဝမရှိပါဘူး။” ဟု ဘိုင်ဒန်က သတင်းထောက်များအား ပြောခဲ့သည်။ “အရင် အစိုးရလေးဆက်လုံးက ဒီရည်မှန်းချက်ကို မရရှိသေးပါဘူး။ ဒါဟာ မကြုံဖူးတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပါပဲ။”
သံတမန် Sung Kim က သံတမန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးသံတမန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်က ကြေညာခဲ့သည်။
မွန်ကလည်း နှစ်နိုင်ငံ မိတ်ဖက်များက ဆောင်ရွက်ရမည့် “အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရန် အလိုအပ်ဆုံး ဘုံတာဝန်” အဖြစ် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက် အပြီးတိုင်ကင်းစင်ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ၎င်း၏ မှတ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ဘိုင်ဒန်က ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အားပေးထောက်ခံမှုကို ပြသခဲ့ကြောင်း မွန်ကပြောကြားခဲ့သည်။ “အမေရိကန်နဲ့ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့အတူ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ တိုးတက်ဖို့လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်-မြောက်ကိုရီးယား ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဘိုင်ဒန်အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်နှင့် အစည်းအဝေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာ နျူကလီးယားလက်နက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုအတွက် ပြုံယမ်း၏ ကတိကဝတ်ဖြစ်ကြောင်း အလေးထားပြောခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များသည် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး၊ နည်းပညာပေါ်ထွန်းလာမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဘက်စုံကာကွယ်ဆေးမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုကို ထူထောင်ရန် နှစ်နိုင်ငံက သဘောတူညီခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့နေသည့် တောင်ကိုရီးယား တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၅၀,၀၀၀ အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘိုင်ဒန်အစိုးရက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒသုံးသပ်ခြင်းမှာ ဧပြီလကုန်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်အနေဖြင့် လမ်းကြောင်းများစွာမှတစ်ဆင့် ပြုံယမ်းဘက်သို့ ဆက်သွယ်လျက်ရှိသော်လည်း တုံ့ပြန်မှု တစ်စုံတစ်ရာ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
ကင်ဂျုံအန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လက စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၌ နျူကလီးယားလက်နက် အပြီးတိုင်ကင်းစင်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခိုင်မှုအတွက်လည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ပြုံယမ်းနှင့် ဝါရှင်တန်အကြား နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းစင်ရေး ဆွေးနွေးမှုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် သဘောတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိခဲ့ဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကင်-ထရမ့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကတည်းက ရပ်တန့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, May 21 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden and visiting South Korean President Moon Jae-in on Friday expressedashared willingness to engage with Pyongyang, reaffirming the goal to denuclearize the Korean Peninsula.
Moon is the second foreign leader, after Japanese Prime Minister Yoshihide Suga in April, to make an official working visit to the White House during the Biden administration.
Duringajoint press conference at the White House following their meeting, Biden said he and Moon discussed the shared approach to the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
“Our two nations also shareawillingness to engage diplomatically with the DPRK, to take pragmatic steps that will reduce tensions as we move toward our ultimate goal of denuclearization of the Korean Peninsula,” he said.
Biden announced that career diplomat Sung Kim will act as the U.S. Special Envoy for the DPRK to drive diplomatic efforts.
He noted that Biden expressed support for the inter-Korean dialogue and cooperation. “Under close cooperation with the U.S., we will work to facilitate progress in inter-Korean relations, so as to achieveavirtuous cycle with U.S.-DPRK dialogue.”
Biden did not rule outameeting with DPRK leader Kim Jong Un, but stressedaprecondition of the meeting would be Pyongyang’s commitment to discussing its nuclear weapons.
The two leaders also discussed cooperation on issues of regional security, emerging technology, climate change, and COVID-19 vaccines. The two countries agree to establishacomprehensive vaccine partnership, and the United States will provide vaccinations for 550,000 South Korean troops working in close contact with American forces.
The Biden administration at the end of April completed its policy review towards the DPRK. The White House said that it had reached out to Pyongyang through several channels but had not yet received any response.
1- U.S. President Joe Biden addressesajoint session of Congress in Washington, D.C., the United States, April 28, 2021. (Melina Mara/Pool via Xinhua)
2-South Korean President Moon Jae-in waves upon his arrival at the White House in Washington D.C., the United States, on June 30, 2017. (Xinhua/Yin Bogu)